Kyay Zu Shin Co.,Ltd Carmudi Myanmar [Burma]
09771391484 (Yangon) English (EN)	မြန်မာ (MY)	email ပို့ရန်	Kyay Zu Shin Co.,Ltd	ယုံကြည်ရသော ရောင်းသူ	သင့်ရဲ့ နာမည် အီးမေးလ်
Kyay Zu Shin Co.,Ltd
Kyay Zu Shin Co.,Ltd –
No.19, Padonmar Road, Dagon Township.
Kyay Zuu Shin
Welcome to the page of Kyay Zu Shin ! Are you tired of taking the bus? Is your car getting old? Are you looking foranew vehicle for any reason whatsoever? Luckily for you, Kyay Zu Shin can easily be found in Dagon. It is an exceptional dealership selling in particular . Moreover we are and offer . We can confidently guarantee you will be hard pressed to find better value for your money elsewhere. Check out our cars and give usacall drop usamessage! Be sure to mention Motors.com.mm when you pick up the phone. မင်္ဂလာပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့Kyay Zu Shin Car Showroom မှ ကြိုဆိုပါတယ်။ မကြာခဏကားပျက်လို့ စိတ်ညစ်နေပါ သလား (သို့) သင့်ရဲ့ကားဟောင်းကြီးကို ကားသစ်နှင့် လဲလှယ်ဖို့ စဉ်းစားနေ ပါသလား။ ဘယ်လိုအကြာင်း ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် သင်ကားဝယ်ဖို့ စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ Showroom မှာ ကားမျိုးစုံကို သင့်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Showroom ကတော့ ဂျပန် နိုင်ငံထုတ် ကားများကို အဓိကထား၍ ရောင်းချသော ကားအရောင်းအ၀ယ်စင်တာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှ ကားဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ အချိန်ကုန်၊ ငွေကုန်သက်သာမှာဖြစ်ပြီး စိတ်ချမ်းသာမှု ရရှိမှာ အသေအချာဖြစ်လို့ ယခုပင် ကျွန်ုပ်တို့ကားများကို ရှာဖွေကြည့်ရှုပြီး ဖုန်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ မက်ဆေ့ခ်ျပေးပို့ခြင်း ဖြင့်သော်လည်းကောင်း ဆက်သွယ်ဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေ ခင်ဗျား။ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်လျှင်လည်း Motors.com.mm မှတစ်ဆင့် ရှာဖွေတွေ့ရှိကြောင်း ပြောကြားပေးဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။” အဆင့် သတ်မှတ်ချက်များ
Kyay Zu Shin Co.,Ltd အတွက် တင်ပြထားတဲ့ အ‌ကြောင်းအရာ‌တွေမရှိ‌သေးပါဘူး။ ပထမဦးဆုံး အ‌နေနဲ့ အ‌တွေ့အကြုံကို တင်ပြတဲ့သူလုပ်လိုက်ပါဦး။
09:30 - 17:30 အင်္ဂါနေ့:
09:30 - 17:30 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့:
09:30 - 17:30 ကြာသပတေးနေ့:
09:30 - 17:30 သောကြာနေ့:
09:30 - 17:30 စနေနေ့ :
09:30 - 17:30 တနင်္ဂနွေနေ့:
09:30 - 17:30 ရရှိနိင်သောဝန်ဆောင်မှုများ။